Dowladda Jabuuti oo War kaso saartay Xiriirka kala dhexeya DFS – Radio Daljir
Agoosto 17, 2018 10:31 b 0
Maxamuud Cali Yuusuf oo ah Wasiirka arrimaha dibadda dalka Jabuuti ayaa sheegay in xiriirka Soomaaliya iyo Jabuuti uu sii ahaan doono mid xooggan, kadib qoraal kooban oo uu ku soo qoray bartiisa Twitter-ka.
Wasiir Maxamuud ayaa sheegay booqashada Madaxweynaha Soomaaliya uu ku joogo magaalada Jabuuti inay xaqiijineyso xiriirka soo jireenka ah ee ka dhaxeeya labada dal, islamarkaana labada Madaxweyne ay ka wada hadleen arrimo labada dal ku saabsan oo waxyaabihii laga wada hadlayna laga soo saari doono war-murtiyeed.
“Waxaan idin xaqiijinayaa xiriirka Soomaaliya iyo Jabuuti inuu sii ahaan doono mid xooggan, Madaxweyne Farmaajo oo booqasho ku jooga Jabuuti ayaa dhiggiisa Jabuuti wuxuu kala hadlay xiriirka labada dal, waxaanu nahay laba dal oo walaalo ah oo aan si naba u kala maarmin”. Ayuu yiri Wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti.
Wuxuu qiray xaaladihii adkaa iyo mad madowgii galay xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Jabuuti, balse wuxuu kalsooni ka muujiyay in dhammaan arrimahaasi la isku afgartay in laga gudbo.
Xiriirka Jabuuti iyo Soomaaliya ayaa xumaaday, wixii ka dambeeyay markii Madaxweynaha Soomaaliya uu ku baaqay in dalka Eritrea laga qaado cunaqabateynta hubka ee saaran.
Jabuuti ayaa hadalkaasi caro xoogan ka qaaday, waxaana safarka Madaxweynaha uu shalay uu ku gaaray dalkaasi uu la xiriiraa qancinta tabashada reer Jabuuti, ciidamo ka socda Jabuuti ayaa waxa ay joogaan Soomaaliya iyaga oo ku hawlgala magaca AMISOM.